Vana Tablet Ongororo 2022 - Yakazara Gwaro
Vana Tablet Ongororo
Blackview Tab 6 Vana
Chipo chemwana ane gore
Ongororo Yepiritsi Yevana - Yakanakisa Tablet Yevana 2022
Uri kutsvaga akavimbika Vana tablet test nemaitiro akajeka? Tine iwo akanakisa evana mapiritsi 2022 akaedzwa.
Mahwendefa kubva kuApple
Mahwendefa kubva kuAmazon
Yakanakisa mhando 2022
Vana tablet bvunzo vapepeti
Yakagadziridzwa Kubvumbi 29, 2022
Uri kutsvaga akavimbika Vana tablet test nemaitiro akajeka? Tine iwo akanakisa evana mapiritsi 2022 akaedzwa. Kutenga piritsi revana mari huru. Tine mhando dzemazuva ano pamutengo-kuita uye Ushamwari hwevana hwakaedzwa. Zvino verenga uye uzvichengetedze iwe pachako kune mari yakashandiswa zvinhu zvakanakisisa iwe nemwana wako. Dzvanya pano izvozvi kuti uverenge ongororo yedu yemahwendefa akasiyana uye uone kuti ndeipi ingave yakanakira mwana wako.
Test anokunda chinzvimbo uye muchidimbu
Kana akatengwa matsva, mapiritsi evana anofanira kunge ane zvinhu zvakawanda sezvinobvira asi achidzora kuvabereki
Rondedzero yemapiritsi evana
Mhedzisiro yekuongororwa kwetablet yevana zvakadzama
1. Blackview Tab 6 Vana tablet yevana
shandura: Makore matatu kusvika masere
childlock: iKids nzvimbo yekudzora kwevabereki, app freezer, password kuchengetedza, nguva manejimendi, manejimendi yekushandisa, manejimendi yekushandisa, webhusaiti manejimendi.
Maakaundi akawanda evana: Hongu
garandi: Makore maviri (Maererano nemugadziri: Kana paine chirema, inogona kudzoserwa kumugadziri uye piritsi rekutsiva richaunzwa)
utano: Low Blue Light Technology, Rima Mode, Nyaya haina chepfu uye haina kunhuwa
Kuchengetedza kugona: 32GB (256GB inowedzera)
kamera: kumashure, mberi
Kugadziriswa kwekamera: 2MP + 5MP
Chiyero chechigadzirwa X X 20.8 12.4 0.9 masendimita
mabhatiri 1 lithium-ion mabhatiri anodiwa (akabatanidzwa).
väriä: Bhuruu / Pingi
Ratidza saizi 8 inch, 1280*800 high-definition IPS touch screen
Processor processor: 8
Mhando yekubatanidza: 5G WIFI, 4G LE, Bluetooth
uchishandisa system Android 11 uye Doke OS_P 2.0
Hupenyu hwebhatiri: 9.9 watt maawa
Item uremu : 365 magiramu
Zvibodzwa zvedu 9.6
Kubatana: USBC port, MicroSD slot, 3,5mm headphone jack
SIM: Dual SIM (2*Nano SIM kana 1*Nano SIM + 1*microSD)
Specials: mbiri-screen varaidzo modhi, mbiri 4G LTE: inogona kushandisa makadhi maviri efoni panguva imwe chete, Face ID kuvhura, dehwe kesi
2. 🥈 Moto HD 10 Vana Tablet
Saizi yekuratidzira: 10,1 mukati
32 GB yekuyeuka
Colors: Case mudenga bhuruu, aquamarine kana lavender
Kamera yekumberi nekumashure
childlock Masefa ezera, zvibodzwa zvekudzidza uye miganhu yenguva
kugadzirisa zera: mushure mekupinda zuva rekuzvarwa
Google Play Store inogoneka
simba rekuchengetedza modhi
chiteshi chekuchaja: USB-C-(2.0)
Hupenyu hwebhatiri: Kusvikira maawa gumi nemaviri
Zvibodzwa zvedu 9.65
Inoshanda system: Android 10
Saizi yekuratidzira: 8 mukati
8 inch HD kuratidza
Kuchengetedza: 32GB (inokwidziridzwa kusvika ku128GB)
Colors: Mavara maviri; bhuruu nepingi
Playstore: Google Play Store inogoneka
chibatiso: AEEZO Yemahara Kudzora Kwevabereki App: Bata vana uye tarisa zvichangobva kuitika + frequency uye nguva yekushandiswa
Hupenyu hwebhatiri: ‎9.25 maawa
encombrements: 21 x 12.5 x 1 cm; 350 magiramu
kamera: makamera maviri (2MP+5MP).
garandi: Kudzoka kwegore uye kuchinjana basa.
4. Moto 8 HD Tablet Kids Edition
Inoshanda system: Moto OS
2 makore makore waranti: Chishandiso chichatsiviwa pasina muripo
0% mari: €45,00 x 3 mwedzi wega wega
8 inch HD kuratidza yemifananidzo nemavhidhiyo anopinza
Amazon Vana +: ad-yemahara media library
WiFi inoenderana: internet isina muganho
32 GB ndangariro ne microSD slot: kusvika pa 1 TB anowedzera
Colors: Inowanikwa mune matatu mavara
Kugadza nguva yekushandisa yevana zvinogoneka
Zvibodzwa zvedu 9.2
5. HAPPYBE Vana Tablet
childlock: password kuchengetedza sisitimu, skrini nguva yekumisikidza, kuchengetedza modhi uye kubhurawuza zvemukati manejimendi.
utano: Low Blue Light tekinoroji
Kuchengetedza kugona: 32 GB (inokwidziridzwa kusvika pakakwirira 128 GB)
Chiyero chechigadzirwa X X 21 12.4 1 masendimita
väriä: Bhuruu, Pingi
Display: 8 inches, 1920x1200 pixels
Processor processor: ‎4
Mhando yekubatanidza: Wi-Fi
uchishandisa system Android 9.0 - 10 (maitiro anosiyana)
accumulator: 5000mAh lithium polymer bhatiri
Hupenyu hwebhatiri: ‎4.9 watt maawa
Item uremu : 863 g
Kubatana: USB Type-C, MicroSD slot, Headphone jack
play store: Zvinogoneka
Specials: "Boka reMhuri" app inobvumira kutaura uye kuita mafoni efoni nevana
contra: 5V 2A charger inoda kutengwa zvakasiyana
Zvibodzwa zvedu 9.1
6. ANYWAY.GO ‎KT1006 Vana Tablet
Chiyero chechigadzirwa X X 24.4 20.2 3.4 masendimita
Display: 8 inches, 1280x800 pixels
Mhando yekubatanidza: Bluetooth, WiFi
uchishandisa system Android 10
accumulator: 6000mAh lithium polymer bhatiri
Hupenyu hwebhatiri: ‎9.25 watt maawa
Item uremu : 540 magiramu
Zvibodzwa zvedu 9.0
childlock: Vabereki vanogona kutarisa, kuseta nguva yemutambo, nguva yemutambo uye kuwanikwa kweapp muaccount yevabereki
utano: Bhuruu mwenje sefa, mitambo kubva kune yako app chitoro haina ad-isina
Kuchengetedza kugona: 16 GB (inenge 12 GB ichiri kuwanikwa mushure mekutanga kuiswa)
Chiyero chechigadzirwa 25x18x2cm; 780 magiramu (Yakaomeswa), 7.7 x 17.5 x 24.1 masendimita (Mota),
väriä: Chiedza cheBlue (Yakaoma), Mustard Yero (Toystory), Signal Red (Mota), Turquoise Blue (Mickey Mouse Bundle + Headphones)
Ratidza saizi 7 Zoll
uchishandisa system Android 8.1 Oreo / kana Android 8.1 Go (Mickey Mouse neMota shanduro)
Item uremu : 780 magiramu (Yakaoma), 485 magiramu (Mickey Mouse),
Kubatana: Micro USB port, MicroSD slot
play store: Hazvigoneke (Youtube neYouTube Vana vanogona chete kushandiswa kuburikidza neSafe-Brower uye whitelisting)
Specials: Anopfuura mazana mashanu emitambo uye maapplication ane mwedzi gumi nemiviri yemahara yekuwana iyo 'GameStore Junior App Store'. (Mushure meizvozvo 500 euros kwegore rimwe.)
Zvibodzwa zvedu 8.9
Kubva 89,90 - 124,99 EUR
Chiyero chechigadzirwa ‎19 x 12 x 1 cm; 350 magiramu
Processor processor 4
Ukuru hwe RAM 2 GB
Kuchengetedza Art DDR3 SDRAM
Kubatanidza Rudzi Wi-Fi
uchishandisa system Android
mabhatiri zvaisanganisira Hongu
Hupenyu hwebhatiri: ‎11.1 watt maawa
Item uremu : 350 g
Zvibodzwa zvedu 8.6
Kubva ku98,99 EUR
Saizi yekuratidzira: 7 mukati
7 inch HD kuratidza
Colors: Inouya mumarudzi maviri: bhuruu uye pink
AEEZO Yemahara Kudzora Kwevabereki App: Bata vana uye tarisa zvichangobva kuitika + frequency uye nguva yekushandiswa
Zvibodzwa zvedu 8.4
Kubva ku85,83 EUR
Methodology yevana tablet test
Takashandisa uye kuyedza ese emakumi maviri nematatu emapiritsi evana akasiyana muyedzo mukati memazuva mashanu. Kubva pamakumi maviri emapiritsi anogona kuve evana, takazoshandisa gumi mukuyedzwa kwenguva yakareba uye tikaaisa mukufamba kwawo. Chengetedzo pamudziyo, sisitimu yekushandisa yakashandiswa uye kubata kwevana ndiyo yaive nzira huru yekuongorora kwedu.
Mushandisi wemashandisirwo aifanira kugadzirwa kuti aenderane nezvinodiwa nevana. Izvi zvinosanganisira kubata senitivity, kufamba neakadzika mota hunyanzvi uye kuumbwa kwemamenu uye zvirimo. Idzi dzaifanira kusvikirika nyore kuvana.
Technical features. Izvi zvaisanganisira resolution yechiratidziro, kupenya uye maratidziro. Zvakare memory vhoriyamu, kamera resolution uye kumhanya kwe processor.
Chengetedzo marongero uye controllability kune vanochengeta zviri pamutemo. Mukana wekumisa nguva yekushandisa waifanira kuwanikwa. Vabereki vaifanira kukwanisa kudzora zvinhu zvingadyiwa nemwana uye vakwanise kuongorora zviitiko zvemwana. A mubereki app yaive plus.
utsigo. Mhando uye chiyero checasing chaifanira kumira kudonha kwemamita matatu. Mukuwedzera, hapana kunhuhwirira kusingafadzi kunofanira kubuda kubva kune zvinyorwa.
Zvinodhura. Isu takabvisa zvachose vagadziri vane mari yakavanzwa kana misungo yekunyorera kubva pane ino ongororo.
Mhedzisiro yakadzama: Amazon Fire 8HD piritsi
Iyo Fire 8 HD Tablet Vana Edition ine yemhando yepamusoro, yakagadzikana yepurasitiki furemu. Vana vadiki nevadiki vanofarira kuyedza miganhu yavo uye njodzi yekukuvadza piritsi racho vanoshandirwa zvakanaka neizvi. Isu tinotenda piritsi iri richava mufambidzani akasimba kwemakore mazhinji, kunyangwe kuvana vadiki, sezvo data remushandisi rataongorora rinoratidza kuti furemu nechidzitiro zvinomira zvakanaka kana zvichishungurudzwa nevana.
Tafura iyi isarudzo yakanaka kuvana nekuti haina huremu, yakasimba, uye ine bhatiri rehupenyu hwakareba. Uyezve, inopa zvinopfuura mitambo chete - unogona kuishandisa kuona mafirimu kana mapurogiramu eTV, kuverenga mabhuku, kutamba mapurogiramu ekudzidzisa, kana kuita basa rechikoro! Uye nekudzora kwevabereki, unogona kudzikamisa zvavanoona online kuti vasaonekwe kune chero chinhu chisina kufanira.
✔️ Makore maviri-yekunetseka-yemahara vimbiso: Chishandiso chinotsiviwa kana chikatyoka panguva ino
✔️ Kudzora kwevabereki: inogadzirika zvizere nhanho yekuchengetedza zvichienderana nezera uye zvido zvemushandisi
✔️ Mari inogoneka pa0 muzana muzvikamu zvitatu zvepamwedzi zvakatenderedza 45 euros
✔️ Eight inch kuratidza ine Yakazara HD resolution
✔️ Yako midhiya raibhurari isina kushambadza neAmazonKids + kunyoreswa
❌ Hapana Google Play Store inogoneka nekuti chishandiso chinoshandisa Fire OS (yeAmazon yega sisitimu yekushandisa) pane Android. (Tungamira maitiro ekuisa Netflix zvakadaro)
❌ Chiratidziro chinoratidzika kunge chakasviba
❌ LTE haigoneki paunenge uchienda
tablet yevana contain vakatenga zvitsva anenge ese maficha ane midziyo yevakuru zvakare pamusika. Vagadziri vakazvimisira chinangwa chekusiya mapiritsi achikura nawo kuitira kuti vana vakwanise kuashandisa vakazvimirira. Panguva imwecheteyo, kunewo mabasa ayo vabereki bvumira iyo Deredza vana vavo nguva yescreen uye kushandisa internet uye monitor. Saka kuti piritsi kuti zera uye shingirira kuenda kuchikoro anogona akawanda Mahwendefa emhando dzakakodzera vadzidzi. Kune rumwe rutivi, mahwendefa emazuva ano evana anovavarira kuita izvi zvakanyanya sezvinobvira mwana-ane hushamwari kupa vana mukana wekubatsirwa vakazvimiririra kubva vachiri vadiki uye zvinoenderana nevashandisi vadiki kukura nawo. Nekuti anogona kuchinjirwa kune chero zera, mahwendefa anogona kuenda kure hupenyu achieve. Izvo zvine imwe zvakare kwezvakatipoteredza, iyo yaunofanira kufunga nezvayo paunenge uchitenga. Vabereki vakawanda vari kunetsekawo kuti a Tafura yevana ine musoro ndizvo uye zvachose dzidzo inokosha anogona kuva. Isu tinoenda mune zvakadzama pane aya mapoinzi pazasi muyedzo.
Mahwendefa emazuva ano ane zvinhu zvakawanda zvinobvumira vabereki kudzora vana pavanenge vachivashandisa uye kupa vana mukana wekubatanidza kutamba uye kufara nekudzidza. Inosanganisira piritsi yevana 2021 inofanira kusanganisira ndeaya:
Iyo timer yekudzikamisa nguva yekushandiswa kwevana (Zvimwe pamusoro wenyaya: Inguva yakawanda sei skrini yakanakira vana? / Lockdown vana skrini nguva)
Zvimiro zvakaita sekhamera, kamera yekumberi uye kumashure kamera
Micro SD slot kuwedzera kuchengetedza
Yakagadzika chivharo chekudzivirira kubva mukukanganisa kukuvara (Zvimwe pamusoro wenyaya: hukasha muhucheche)
USB-C yekuchaja sarudzo
Headphone kubuda, maikorofoni kupinza uye tafura gomo
Mhedzisiro yekuongororwa kwetafura yevana - ndeipi piritsi yakanakira vana?
Sehwendefa yevana, tinokurudzira izvi pamwe chete Moto 8 HD Tablet Kids Edition. Chikonzero chikuru: Inosanganisira kuburikidza neAmazon one makore maviri waranti. Saka mudziyo unotyoka, unogona kuishandisa nekukurumidza exchange - uye kwemakore maviri. Mukuwedzera, inoratidzira mabasa ose ehwendefa yakazara-yakazara yevakuru uye saka inogona kukura pamwe navo. The mushandisi interface uye zviri mukati zvinoshanduka, zvinodzoreka uye zvakagadzirirwa kune Zvinoenderana nezvinodiwa nevana, ari piritsi anogona ku zera rechikoro kushandiswa. Nzvimbo yechipiri inoenda kuVankyo S8 piritsi yevana. Zvakadaro 60 GB chikuru Kuchengetedza nzvimbo, Mukuwedzera kune maitiro evabereki, inewo maitiro ari nyore pameso. Kune zvakare kumberi nekumashure kamera ine yakanaka mhando yemufananidzo uye inowanikwa kune vanoda Google Playstore. Iri zvakare piritsi rakazara. Nekugadzirisa zera, iyo Vankyo S8 inogona kushandiswa kusvika zera rechikoro.
Mahwendefa inzira huru yekuchengeta vana vako vachivaraidzwa.
Vana Tablet Bvunzo ndiyo yakanakisa nzvimbo yekuziva kuti ndeipi piritsi rakakunakira iwe nemhuri yako. Tine wongororo yemapiritsi ese epamusoro kuitira kuti iwe ugone kuita sarudzo ine ruzivo nezve iyo piritsi yakakunakira iwe. Uchakwanisa kuona kuti tablet yega yega ine zvipi, kuti imarii, uye kuti izera ripi rakakodzera usati watenga.
Iyo yakakwana chipo pfungwa! Ipa vana vako chimwe chinhu chavanozoda uye izvo zvichavabatsirawo kudzidza zvakawanda nezve tekinoroji munyika ino yedhijitari yatiri kurarama mairi nhasi. Uyezve, mahwendefa mazhinji akazadzwa nemaapplication ekudzidzisa anogona kubatsira vana kudzidza hunyanzvi hutsva vachivachengeta vachivaraidzwa.
Vana vanogara vari parwendo uye vanoda chimwe chinhu kuti varambe vachivaraidzwa.
Mahwendefa inzira huru yekuti vana vadzidze nezve tekinoroji munzvimbo yakachengetedzeka isingavatsause kubva kumabasa avo echikoro sezvinogona kuitwa nemafoni. Uye kana mwana wako achida kutamba mitambo pahwendefa ravo, saka izvo zvakakwana nekuti kune matani emitambo yekudzidzisa zvakare! Saka usamirire zvakare - wana mwana wako piritsi nhasi!
Twitter Instagram nzira
© 2022 Vana Tablet Ongororo
Isu tinoshandisa makuki pane yedu webhusaiti kukupa iwe chakanyanya kukosha chiitiko nekurangarira zvaunofarira uye kudzokorora kushanya. Nekudzvanya "Gamuchira Zvese", unobvumidza kushandiswa kweZVESE makuki. Nekudaro, unogona kushanyira "Cookie Zvirongwa" kuti upe mvumo inodzorwa.